Rita, Writing for My Sake!: တက္ကသိုလ်ဆရာ - အောင်သင်း
Posted by Rita at 5/09/2011 08:30:00 AM
တကယ်ကောင်းပါသည်၊ မျှဝေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးပါ၊ ဆရာမှန်တယ်ဆိုတိုင်း လိုက်မမှန်ဘို့ပြောထားသည့် ဆရာကြီး၏စကားမှာ မှတ်ယူစရာပင်။
အင်း...တိုက်ဆိုင်မှုလို့ပဲ ပြောရမလား... ကိုယ်နောက်ထပ်ရေးဖို့ ခေါင်းထဲရှိနေတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုက ဆရာမင်းသုဝဏ်မျိုးဆက်နဲ့ ဆက်နွယ်မှုရှိနေတယ်။
Sigh! သက်ပြင်းပဲ ချလိုက်တော့မယ်ကွယ်။
Saya (U) Aung Thin isaremarkabe Myanmar writer, and appreciate on his coherent and comprehensive descriptions.
For myself, I felt some of his aphorisms are vigorous expressions than nature.